GỤỌ NKE Abbey Afrikaans Ahanta Aja Akha Albanian Altai Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Arabic (Morocco) Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Assamese Attié Aukan Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Dairi) Batak (Dairi) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bolivian Sign Language Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Bulgarian Sign Language Bété Cambodian Carib Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombian Sign Language Comorian (Ngazidja) Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dusun Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Edo Efik Emberá (Catío) English Esan Estonian Ewe Fang Fante Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon Frafra French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Ghomálá’ Gitonga Gokana Greek Greek Sign Language Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guatemalan Sign Language Guerze Guianese Creole Gujarati Gun Guna Guéré Haitian Creole Hausa Havu Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Sign Language Huastec (San Luis Potosi) Huave Huichol Hungarian Hungarian Sign Language Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Isoko Italian Italian Sign Language Itawit Japanese Japanese Sign Language Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Khasi Kikaonde Kikongo Kikongo ya Leta Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kituba Kongo Korean Korean Sign Language Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lambya Laotian Lari Latgalian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Madagascar Sign Language Makhuwa-Meetto Malagasy Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mam Mambwe-Lungu Mangareva Maninkakan (Eastern) Mano Manyawa Mapudungun Marathi Mari Marquesian (Hiva Oa) Marquesian (Nuku Hiva) Marshallese Mauritian Creole Maya Mayo Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Mbunda Medumba Mende Meru Mingrelian Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Motu Mozambican Sign Language Myanmar Myanmar Sign Language Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Nahuatl (Veracruz) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nepali Sign Language New Zealand Sign Language Ngabere Ngangela Ngbandi (Northern) Ngiemboon Nias Nicaraguan Sign Language Nicobarese Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nsenga Nsenga (Mozambique) Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Phimbi Piaroa Pidgin (Cameroon) Pilagá Polish Pomeranian Ponapean Portuguese Portuguese (European) Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romanian Sign Language Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Russian Russian Sign Language Rutoro Rwandan Sign Language Réunion Creole Saint Lucian Creole Salvadoran Sign Language Samoan Sango Saramaccan Sarnami Sena Senoufo (Cebaara) Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Shuar Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Susu Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Taabwa Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai (Northeastern) Thai Sign Language Tigrinya Tiv Tlapanec Toabaite Tojolabal Tok Pisin Tokelauan Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Twi Tyrewuju Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruguayan Sign Language Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Vietnamese Sign Language Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Wolof Xavante Xhosa Yacouba Yapese Yemba Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Betel bụ okwu Hibru. Ọ pụtara “ụlọ Chineke.” (Jenesis 28:​17, 19) Ihe a ka a na-akpọ ebe niile Ndịàmà Jehova na-anọ ebi akwụkwọ ha ma na-ahazi otú ọrụ ikwusa ozi ọma ha na-arụ ga-esi na-aga. Aha a dabara adaba n’ihi na ihe niile a na-eme ebe ahụ bụ gbasara ofufe Chineke. Òtù Na-achị Isi nọ n’isi ụlọ ọrụ anyị dị na Niu Yọk nke Amerịka. Ha na-anọ ebe ahụ ekwu otú ihe ga-esi na-aga n’alaka ụlọ ọrụ anyị dị iche iche e nwere n’ụwa. A na-akpọ ma ndị na-arụ n’isi ụlọ ọrụ anyị ma ndị na-arụ n’alaka ụlọ ọrụ anyị ndị ezinụlọ Betel. Ihe mere e ji akpọ ha ezinụlọ bụ na ha bi otu ebe, na-arụkọkwa ọrụ ọnụ. Ha na-anọ otu ebe eri nri, na-amụkọkwa Baịbụl ọnụ.​—⁠Abụ Ọma 133:⁠1.
Ọ bụ ebe a na-arụ ọrụ gbasara Alaeze Chineke. Ọrụ bụ́ isi a na-arụ na Betel bụ ọrụ gbasara ịkụziri ndị mmadụ Okwu Chineke. Akwụkwọ a i ji bụ otu n’ime ihe ndị e ji akụziri ndị mmadụ Okwu Chineke. Ọ bụ Òtù Na-achị Isi kpebiri ihe e dere na ya, e jirizie kọmputa zigara ya ọtụtụ ndị nsụgharị e nwere n’alaka ụlọ ọrụ anyị dị iche iche. Mgbe ha sụgharịchara ya, e jiri ígwè na-ebipụta ọtụtụ akwụkwọ n’otu ntabi anya bipụta ya. Mgbe e bichara ya, e bugaara ya ọgbakọ Ndịàmà Jehova e nwere n’ụwa niile. Ha dị ihe karịrị otu narị puku ọgbakọ na puku iri. Ihe a niile ndị ezinụlọ Betel mere bụ iji kwado ọrụ kacha mkpa anyị na-arụ. Ọrụ ahụ bụ ọrụ ikwusa ozi ọma Alaeze Chineke.​—⁠Mak 13:⁠10.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Bụ Betel?